23-kamid ah Isimada Puntland oo maalmaha soo socda Muqdisho u safraya
April 23, 2012 Markacadeey
Magaala madaxda Puntland ee Garoowe waxaa maalmihii u danbeeyey ku sugnaa in badan oo kamid ah Isimada deegaanada Puntland.
Isimada oo intii ay magaalada Garoowe joogeen kulamo la qaatay madaxda sare ee dowladda ayaa sidoo kale ka qayb qaatay aqoon isweydaarsiyo xalinta khilaafaadka ku aadan oo iyaguna Garoowe ka dhacay.
Dhinaca kale Isimada Garoowe ku sugan oo ay tiradoodu 30-kor u dhaafeyso ayaa maalmaha soo socda 23-kamid ahi waxay u safri doonaan caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho.
Safarka Isimada ayaa ah mid salka ku haya sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen shirweyne ay Isimada beelaha Soomaaliyeed ku yeelanayaan magaalada Muqdisho iyo aqoon iweydaarsiyo loo qaban doono.
Qaar kamid ah Isimada oo codsaday inaan magacyadooda la baahin ayaa Horseed Media u xaqiijiyey in ujeedada ugu weyn ee ay Muqdisho ugu safrayaani ay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen tababar loo furayo Isimada Soomaaliyeed.
Tababarkaas ayaa ah mid Isimada lagu barayo qaabka ugu fudud uguna macaquulsan ee ay kusoo xulayaan ergooyinka beelaha Soomaaliyeed uga qayb gelaya shiweynaha ansixinta Dastuurka dowladda dhexe ee Soomaaliyeed.
Dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka socota qaban qaabo xooggan oo loogu jiro sidii loo ansixin lahaa iyadoo dhisme lagu wado goobta la qorsheeyey in shirweynaha ansixinta Dastuurku uu ka dhaco.
Dhowaan ayey ahayd markii magaalada Garoowe lagu ansixiyey Dastuurka Puntland kaas oo ay ergooyinkii ansixintiisa loo soo xulay cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen.